How long would you expect to work with us if employed? ﻿
How long would you expect to work with us if employed?
Tags: how long expect work employed hire job.
ဘယ်အလုပ်ရှင်မဆို ကိုယ့်အလုပ်သမားကို ရေရှည် လက်တွဲချင်တာများပါတယ်။ ဒါမှ ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို စားသုံးရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီမေးခွန်းကို ဖြေမယ်ဆိုရင် ရှဉ့်လည်း လျှောက်သာ၊ ပျားလည်းစွဲသာ ဖြေတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်သမားနဲ့ အလုပ်ရှင်ကြားက လိုအပ်ချက်ကွာဟမှုတွေကြောင့် ရှေ့ဆက်ရန်မဖြစ်တော့တဲ့ အခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေကြမှ ကိုယ်က ဘယ်လောက်ကြာကြာ လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ ကတိစကားရှိနေခဲ့ရင် မျက်နှာပျက်စရာ၊ ကတိမတည်ရာ ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ အချိန်အတိအကျ ပေးတာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပြီး သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် နှစ်ဘက်စလုံး အဆင်ပြေနိုင်မယ့် စကားမျိုးကို ရွေးဖြေတတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ။ ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေသ၍ပေါ့။